YaST, shamwari yakanaka kuO OpenSUSE | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | Zvimwe Linux, Resources
Imwe nguva yapfuura ndakataura izvozvo, nekuda kwe 'yakaipa maneuver' daidza zvakare tora nzira ipfupi, yakanga yatsemuka bhuti rePC yangu uye ini ndaigona kungotanga chikamu changu kubva Windows.
Imi vakomana makandipa matani emhinduro asi mushure mekuyedza akati wandei, iyo GRUB anofara anga achiri akatsiga nekanganiso 13 (uye zvinoenderana nezvaakaita neiyo SuperGrubDisc, akasiyana nemhosho 15, 17 uye 21).
Pakupedzisira, ndakasvika pakufunga kuti dambudziko rekumisikidza raisave PC yangu, yakanga isiri Windows, kunyangwe kupatsanura kana zvimwewo nyaya: dambudziko raive neCD OpenSUSE 11.0 yaakaedza nayo, kakawanda uye zvakare, kudzorera iyo GRUB.
Neraki, izvi zvakagadziriswa nezuro ne kudzoreredza uye kwakatsetseka kudzoreredza of the distro de Linux, Kuchinja KDE kubudikidza GNOME. Ini ndaingofanirwa kubhuya mushure mekuisa kuti zvese zvishande panjanji.
Ini ndinofunga ndakanga ndavataurirawo izvozvo, mushure mekushandisa Kubuntuipapo Ubuntu, Linux mint Saka zvino SUSE, Ndine fungidziro yeKDE graphical nharaunda (ichokwadi nyaya yemunhu, kune vanhu vazhinji nharaunda dzeGNOME dzakanyatsojeka uye dzakafanana neWindows).
Saka ikozvino ndinofanira kutanga basa kwete kureba kana kunetsa zvakadaro kuisa iyo graphical nharaunda, mashandisiro uye kugadzirisa, sekuda kwangu, desktop.
Fungidzira kana iri rimwe basa raifanira kuitwa muWindows. Inofanirwa:
* Isa izvo zvinoshandiswa zvandinoda (uye ndinovimba kuti zvinoshanda);
* Bvisa izvo zvandisingachadi (kana zvichibvira ... mushure meIE isu tatoziva kuti mamwe maWindows application anofanira kusiiwa munzvimbo);
* Gadzirisa desktop;
* Ehe, iwe uchafanirwa kutangazve komputa yako kakawanda sezvazvinodiwa :)
Iwe unofunga kuti izvi zvese zvinotora nguva yakareba sei? Hongu… chaizvo.
Asi mu OpenSUSE ndinayo shamwari yakanaka: inonzi YaST. Ngatiendei kuiyo wiki:
YaST (An Acronym nokuti Chimwezve Setup Danho, nehasha rinoshandurwa se "Asi Mumwe Setup Danho") chiri chikumbiro nokuda openSUSE Linux kuparadzirwa, uyewo zvokutengeserana shanduro SUSE Linux, izvo hwezvekukurukurirana maitiro kutarisira uye Software installation.. Nhoroondo yaro yakatanga kumashure kwekutanga kwekugovera. YaST, pamwe chete neSaX, iri pakati pezvishandiso zvine simba uye zvinoshandiswa nevashandisi zveLinux system management
Mumazuva ayo ekutanga, YaST yakavharwa sosi asi mushure mekunge Novell yatenga SuSE Linux AG yakaburitswa pasi peGNU GPL rezinesi.
Mabasa ayo anosanganisira:
* Kutungamira kwemaseva makuru maseva (inetd uye xinetd)
* Apache webhu server manejimendi
* Postfix mail server kumisikidzwa
* Mushandisi uye boka manejimendi
* Zvematongerwo enyika ezvekuchengetedza
* Isa / uninstall software
* Generic Hardware kumisikidza (makadhi eruzha, mbeva, mufaro, makadhi ekutora mavhidhiyo, dhisiki manejimendi, maprinta, scanner, Bluetooth, makadhi enetiweki, WiFi ...)
* Gadzira bhutsu disks
* Mutoro wekugadzira mutyairi dhisiki (inoverenga akawanda windows .inf mafaera)
* Yepamberi system manejimendi (sysconfig)
Izvi zvinorevei? Kuti zvese zvigadziriso, kuisirwa, kusabvisa, kubatiswa kwemapakeji ekugadzirisa uye mamwe andichazokwanisa kubata nenzira centralized uchishandisa chishandiso ichi.
Ehezve, admin kana mudzi kugadzirisa nekushandisa iyo YaST (kudzivirira matambudziko, gara uchiyeuka: kana iwe ukashandisa Linux, iwe unonyatso tarisiro yekushandisa kwayo kana isiriyo kushandisa kwePC yako).
Chekupedzisira, nekungopinda muYaST semubati uye nekuisa mapatani. KDE4 desktop nharaunda uye KDE4 base system, Ini ndatova nemaapplication ese andinoda kuisirwa MUIMWE NGUVA.
Ini ndinofunga ndareve kutaura kuti YaST mukwikwidzi akasimba kuti ave shamwari yangu yakanaka: razz:. Uye kana zvisina kudaro, tinogona kugara tichienda kunyaradzo.
Uye newe, Ndeipi shamwari yakanaka yauinayo pane yako Linux distro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » YaST, shamwari yakanaka mu OpenSUSE
Ini ndinopika ndinonzwa kunge urikutaura zvemberi Chinese
Wakafadza Nitsuga kune yako blog.
Synaptic, iyo compiz fusion scale plugin, firefox, rhythmbox, liferea, iyo console, shanduko (uye karenda yayo) uye zvimwe zvishoma zvirongwa zvinoita kuti hupenyu hwangu huve nyore.
Ini ndinokuudza kuti zvinotora nguva yakareba sei mumawindo:
1) Dhawunirodha WindowsBlinds (kuchinja theme) (~ 40MB): maminetsi makumi matatu
2) Tsvaga mutswe: maawa maviri
3) Tsvaga uye kurodha musoro wenyaya: maminetsi gumi nemashanu
4) Dhawunirodha BootXP: (~ 5MB): maminetsi gumi
5) Tsvaga uye kurodha musoro wenyaya: maminetsi gumi nemashanu
6) Ita kuti ishande: Maminitsi makumi matatu
DZOSA DZIMWE NGUVA
7) Tsvaga uye utore LogonLoader: ingangoita maminetsi gumi neshanu
8) Gadzira iyo
9) Tsvaga uye kurodha musoro wenyaya: maminetsi gumi nemashanu
Ini ndinofunga pane zvese zvakanditorera maawa masere kuita windows, uye hapana zvinhu zvakaita se gfxboot ( http://aprendiendolinux.wordpress.com/2008/10/29/grub-tipo-suse-en-linux/ ) izvo zvingave zvingangoita maviri mamwe anotangazve ...
MU linux zvese zvinonditora, kunyanya, 1 awa.
Zvakanaka, ini ndinoshandisa dreamlinux uye iyo DreamlinuxControlPanel kunyangwe iri nyore chaizvo inobatsira, heino chinongedzo kumufananidzo wacho
Pane imwe nguva ndakafanirwa kuyedza PC Linux OS uye chinhu chega chandaifarira yaive drakeconf, yakagara nhaka kubva mandriva
Dai zvaisave nekuti yaive KDE uye yaishanda pamwe .rpm mapakeji, ndingadai ndakagara nePCLOS ... asi kuyedza ndiyo chete nzira yekuwana izvo zvaunoda.
Ini handidi kurira kudhara, ndinogara munguva yake yekuita radicalization, asi, kunyangwe pane imwe nguva ndaifarira ndikashandisa Suse, Yast chiri chikonzero nei ndakaita sarudzo yakadaro, zvingave zvakanaka (kana iwe uchida Naty) edza imwe distro ... ive kubva kuNovell ...
Ini handisi kuzoba mutsara wetsamba iyi, asi kuti ndisape chirevo chisina chinhu uye ndisiye zvese zviri mumhepo, chero munhu anofarira zvishoma nezveNovell anogona kuverenga (muChirungu: p) http://boycottnovell.com/
Synaptic, iri mune ese maDebian nePCLOS, Krusader, Ktorrent, Akregator, Konqueror uye yakareba ect.
NaDebian (netinstall) unogona kuita zvaunotaura kuti uise zvese zviri nyore, kumisikidza kushoma uye ipapo unogona kuisa mamiriro emifananidzo aunoda kubva kunyaradzo, kana kuti unogona kurodha kopi pamusoro peneti kana KDE kana GNOME.
Debian isai iyo nenzira iyoyo, diki yekumisikidza uye nekonisheni yekuisa KDE, ine Synaptic ndanga ndichiisa izvo zvandinoda, zvinoda zvishoma kuti uzviise asi iwe uve nechokwadi chekuti unongova nezvaunoda chete.
Zvino kuitira nyore PCLOS xD
Ini ndajaira kutaipa mune apt-tora chinongedzo 'plis-plas' sekutaura kwako inyaya yemunhu yekuravira.
@esty: Iko hakuna "Yepamberi Chinese", chete "Chinyakare Chinese" uye "Basic Chinese".
Uye isu hatisi kutaura muchiChinese, asi muchiRomania, sezvakataurwa naN @ ty (tenda kunaka hatina kusvika ku "mutauro wakafa")
PS: Kana pasina munhu akacherekedza, ikozvino unogona kubaya panick yangu
Ini ndinoda "apt-tora", ini ndiri kwese kwese zvekuti pandakasvika paSUSE rimwe zuva "ndakabatirira" ndikabvisa padhiraivho yangu
@esty: maita basa chaizvo! ahh! uye kusiya makomendi hakukonzere kushaya simba ehh!
Zvakanaka sei nitsuga makorokoto !!
amash @ kumba akadaro
Ini ndaishandisa debian kwenguva yakareba, uye apt-kuwana yaive imwe yeshamwari dzangu dzepamwoyo ... senge synaptic, asi kune avo vachangotanga kubva kutanga ne linux, sezvazvinoitika nedzimwe shamwari, SUSE chimwe chinhu chiri nyore chaizvo. ..
Ipapo kuda kuziva kunokutungamira kuti uedze mamwe ma distros, ikozvino ndine SlackWare yakaiswa semuenzaniso uye izvo zvinondiita dzungu xD!
Ndichiri mutsva kune izvi ^ ^
Pindura kuna amash @ kumba
Muchiitiko changu, ndakafamba nenzira mbiri idzi: kubva Kubuntu kuenda kuOpenSUSE.
Mune iyo distros inoshandisa kugona sekumisikidza uye package maneja, kumhanya uye kugona kwemaneja wavanoshandisa kunoyemurika chaizvo, pamusoro pekugadziriswa kwayo kuri nyore kuburikidza nesource.list. Ndozvandinosuwa zvakanyanya nezveUbuntu.
Asi ini "pandanyatso" kuenda kuOpenSUSE, YaST2 yaive yave pazvitsitsinho zvayo. Iyo haina kunonoka sekureva kwevamwe, iwe unofanirwa kungoisa mupfungwa kuti iwo maviri akasiyana injini dzekushanda. Ko kana ichinonoka kana zvaita senge kwandiri manejimendi e zypper mune koni muSUSE. Haifananidzwe neakakodzera, asi YaST2 inoonekwa haina kunonoka.
Pamwe hauna hanya nekumhanya kwemaneja wepakeji. VhuraSUSE nekutenda kuna Dio ini ndakabvisa iyo yakaoma "versionitis" yainditambudza.
Iye zvino ndinoshandisa chinyararire, uye kana paine zvigadziriso, ini dama uye kuisa.
Chinhu chakakosha kukurudzira kuti paine nguva dzose muLinux Distro imwe kumashure, Amai Distro, kubva iko kumhanya, kuita, kubata nekugadzirisa kuchagara nhaka. Tichifunga izvi, mumwe anogona kutora "mashandiro ainoita" yedu yakasarudzwa Distro.
Zvakanaka, iye anotenda kuti yast chishandiso CHETE maneja wepakeji. hongu, asi rakarasika .. yast ndiyo yakazara yakazara control panel iyo parizvino inogona kuwanikwa mune yekuparadzira linux, manejimendi manejimendi, asiwo dhizaini yekugadzirisa, kernel marongero, backup, boot loader, LM, partitioner, profile maneja, system services, zuva uye nguva, zvishandiso zvemambure, Kugadziriswa kwemasevhisi akadai seapache, tsamba, LDAP, NIS, nfs, iscsi, sshd, samba, FTP, TFTP, squid, DNS, DHCP, apparmor, zvitupa zvakajairika, chitupa chiremera manejimendi, firewalls, vashandisi, uye rondedzero inoenderera nekuenderera mberi, chinhu chepedyo kusvika kune yast chiriporipocho webmin ..
Pindura kuna javobqcol
John Montoya akadaro
Hei imbwa, uye unoisa sei?
Pindura Juan Montoya
Maakaundi Ekushandisa muWindows: Vanotungamira Vatariri?